Xafiiska QM ee Somaliya oo xaqiijiyay in ruux la shaqeeya laga helay Cudurka Corona (COVID-19) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xafiiska QM ee Somaliya oo xaqiijiyay in ruux la shaqeeya laga helay...
Muqdisho (Halqaran.com) – Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay Sabtidii maanta in shaqaale caalami ah oo ka shaqeeya shirkad gaar loo leeyahay oo qandaraas ku leh Qaramada Midoobay laga helay Fayraska Corona (COVID-19).
Qofka laga helay Cudurkaasi ayaa ka howlgalayay Shirkad gaar ah loo leeyahay oo Qandaas kula jirta Qaramada Midoobey, islamarkaana ka howlgasha Garoonka Aadan Cadde.
Qaramada Midoobey waxa ay sheegtay in ay ku wargalisay Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya xilli hore oo subixii Sabtida maanta.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa Jimcihii shalay sheegtay inay soo kordheen laba kiis oo COVID-19 ah, midi waa muwaadin Soomaali ah, midna waa Ajnabi.
Tirada guud ee dadka qaba Cudurka Coronavirus ee Soomaaliya waa 7 ruux, tirada bogsatay waa hal ruux kaliya, majirto dhimasho illaa hadda la diiwaangeliyay oo Fayraska Covid-19 gudaha Soomaaliya.
Xafiiska QM ee Somaliya oo xaqiijiyay in ruux la shaqeeya laga helay Fayraska Corona